Fulldive VR - Virtual Reality APK သည် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Fulldive VR - Virtual Reality
Fulldive VR - Virtual Reality APK ကို
Fulldive Virtual Reality တစ်လူမှု All-In-One ကို VR ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Cardboard နှင့်နေ့ခင်းအိပ်မက်ဟက်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စု: သင်နေ့ခင်းအိပ်မက်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်, သင် Fulldive ရဲ့ icon ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Fulldive ရယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစားသင်ကနေ့ခင်းအိပ်မက် app ကိုတဆင့်ခြင်းနှင့်နေ့ခင်းအိပ်မက်ရဲ့စာကြည့်တိုက်မှတဆင့် Fulldive ရယူနိုငျပါသညျ။
Fulldive virtual reality (VR) အကြောင်းအရာနှင့်အညွှန်းပလက်ဖောင်းထုတ်ပေးတဲ့ 100% အသုံးပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဗီဒီယိုများတုံ့ပြန်သငျသညျ, သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစောင့်ကြည့်သောအရာကိုကိုလိုက်နာတုံ့ပြန်များနှင့်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်, သင်၏အကြိုက်ဆုံးဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုမယ့်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Fulldive သင် browse နှင့်ရှုမြင်မီဒီယာများ၏မျိုးဆက်သစ်, ထိုကဲ့သို့သော 3D နှင့် 360 ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ကဲ့သို့၎င်း, ကိုလည်းဘယ်တော့မှမတိုင်မီကဲ့သို့အင်တာနက်ကို browse ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်သန်းဗီဒီယိုများကျော်ရှာဖွေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ VR Market ကအတွက် 500 ဂိမ်းများကိုကျော်ကစား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာအဆကြီးထွားလာနေပါသည်!
Fulldive ရဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးသည်လူသိရှင်ကြားပြသအရွယ်ရောက်ပြီးသူ / ရင့်ကျက်သောအကြောင်းအရာများကိုတားမြစ်ထားသည့်ထိုကဲ့သို့သော Youtube ကို, Youku, နှင့် Facebook အဖြစ်အတည်ပြုရင်းမြစ်များမှဖြစ်ပါသည်။
Fulldive VR app ကို Google က Cardboard VR သို့မဟုတ်နေ့ခင်းအိပ်မက်နားကြပ်များအပါအဝင်မည်သည့် Virtual Reality ကြည့်ရှုသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို join နှင့် Fulldive နှင့်အတူမီဒီယာများ၏အနာဂတ်စူးစမ်း။
➢ YouTube ကို: VR အားလုံးကို YouTube ဗီဒီယိုစီးကြောင်း
➢ 3D YouTube ကို: VR အတွက် Stream 3D YouTube ဗီဒီယို
➢ 360 YouTube ကို: VR အတွက် Stream 360 YouTube ဗီဒီယို
➢ VR ဗီဒီယိုပလေယာ (2D / 3D Player ကို): ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ကဲ့သို့သင်၏ဖုန်းတွင်ဗီဒီယိုအားလုံးကို Play
➢ VR Browser ကို: VR အတွက်အင်တာနက်အပေါ်ဘာမှ Browse
➢ VR ကင်မရာ: VR အတွက်ဓာတ်ပုံများကိုယူပါ
➢ VR ဓာတ်ပုံပြခန်း: Store နဲ့ VR ၌သင်တို့၏ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို access
➢ VR 360 ဓာတ်ပုံပြခန်း: Store ကိုနှင့်သင့် 360 ဓာတ်ပုံများရယူ
➢ VR Store မှာ, Market ကများနှင့်ဖွင့်တင်: VR မှတဆင့်ပေါ် App အသစ်များနှင့် Access များအတွက် Browse အားလုံး VR applications များ
➢ရောနှောထားသော Reality Apps ကပ
➢ Fulldive Bolt က: VR အတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာ screen ကိုစီးဆင်းစေ
http://android.stackexchange.com/questions/59532/how-can-i-calibrate-: သင်မျောသို့မဟုတ်လက်ဝဲနှင့်လက်ယာပြောင်းလဲမျက်နှာပြင်နှင့်အတူပြဿနာရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, အောက်က link ကိုအတွက်ခြေလှမ်းများအောက်ပါတို့ကသင့်ရဲ့ device ရဲ့အာရုံခံကိရိယာကိုအချိန်အဆညှိကျေးဇူးပြုပြီး The-tilt-sensor ကို-on-android
Fulldive ထုများအတွက် virtual reality ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သွားကြောင်းသင်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်ဖန်သားပြင်ရှေ့မှာထိုင်လျက်ခံရဖို့မလိုအပ်သည့်အခါရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ သင်နှစ်သက်သောရုပ်ရှင်, ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုခံစားဖို့ 3D တီဗီသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းဂီယာအဘို့ထောင်ပေါင်းများစွာပေးဆောင်ခံရဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင် virtual reality မှတဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုသုံးစွဲနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း VR တိုင်းလူတစ်ဦးမှမရရှိနိုင်ပါပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဖြစ်ချင်တယ်။
တစ်ဦးနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားနောက်ခံနှင့်တကွ, Fulldive အဖွဲ့သည်လူတိုင်း VR လက်လှမ်းအောင်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပါတယ်။
- Fulldive အကြောင်းအရာအသုံးပြုသူ-ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာရင့်ကျက်သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာင်နိုင်ပါသည်။
- အီသို့မဟုတ်ရွေ့လျားမှုအနာရောဂါ Fulldive သုံးပြီး၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ
- ငါမသတ်မှတ်တက် / သင်ခန်းစာစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဝဲနေပါတယ်။ ငါဘယ်လို app ကိုအတွင်းပိုင်းသို့သွားသလဲ?
ထိုသင်ခန်းစာမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ညာဘက်ခလုတ်ကို "Skip" သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဆက်တင်ပေါ်တွင်မျက်နှာပြင်-လည်ပတ် enable နှိပ်ပါ
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ဦး Gyro Sensor ကိုမရှိပါ။ သငျသညျအပြည့်အဝ app ကိုသုံးစွဲဖို့တစ် Gyro Sensor ကိုရှိပါတယ်တဲ့ဖုန်းကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဆက်တင်များသို့သွား - နှင့်သံလိုက် / Gyro Sensor ကိုအချိန်အဆညှိပြန်လည်။
uninstall နှင့် reinstall app ကိုယခုမူကား, သင်တို့ရှိသမျှသည်ခွင့်ပြုချက်ကိုခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ ဤသည် VR အတွက်သင့်ဖုန်းမှအကြောင်းအရာများကစားရန် Fulldive ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကို: https://fulldive.com
Instagram ကိုအပေါ် Fulldive Follow: https://instagram.com/fulldiveco
http://facebook.com/fulldiveco: Facebook ပေါ်မှာ Evry လိုပဲ
Twitter ပေါ်တွင် Fulldive Follow: http://twitter.com/fulldive
ကုန်ပစ္စည်း Hunt ကပေါ်မှာငါတို့ထုတ်ကုန် updates များကိုလိုက်နာပါ: https://www.producthunt.com/posts/fulldive-browser
ပိုပြီး QA သို့အဘို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Reddit သွားရောက်လည်ပတ်:
ဤသည်လွှတ်ပေးရန် Facebook ကိုခလုတ်များအတွက်ပြင်ဆင်ချက်များပါဝင်သည်
47.48 ကို MB
Fulldive Co. ,
အကောင်းဆုံးရဲ့ Virtual ...
10 အကောင်းဆုံးက Google ...